Golf Kubadaha, Range Golf Kubadaha, Tour Golf Kubadaha - Vensen
2 kubadaha PC Range kubadaha
Kubadaha Dalxiiska ee 2-PC
Kubadaha Dalxiiska 3-PC (Ionmoer)
Kubadaha Dalxiiska 3-PC (Urethane)
VENSEN Golf waa shirkad oo keli- saarka ah, design, horumarka iyo iibinta cayn kasta oo kubadaha golf. Warshadda wuxuu daboolayaa meel ka mid ah 5, 000 mitir oo laba jibbaaran. Shirkadda waxa uu ku yaalaa Gobolka Jiangsu, Shiinaha, iyadoo gaadiid ku haboon iyo deegaan juquraafi wanaagsan.
Shirkadda isticmaalaa qalabka dejinta shisheeye, alaabta ceeriin shati, oo uu leeyahay Dufcaddii ka mid ah shaqaalaha xirfad farsamo waayarag ah, si loo hubiyo in kubad kasta golf ka warshad uu leeyahay tayo lagu kalsoonaan karo oo sare.
Tilmaamaha bilowga ah si ay ugu celceliyaan golf-ka gudaha
Kalsoonida Shiinuhu Uma Baahan Yahay In Cabsi laga Qabo
Hel Wararkii Ugu Danbeeyay maalin kasta u dhiibay!
wax naga siiya aad email iyo in aad la maalin updated doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay, si faahfaahsan!